‘Ramatoa Polisy’ Rosiana Iray: Fizaràna Voalohany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2016 17:25 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, srpski, English
Sary: Instagram, navoakan'i Kevin Rothrock.
Telo taona lasa izay, nanapa-kevitra ny hiditra ho polisy tao St. Petersburg i Olga Borisova. Valo ambin'ny folo taona ary, araka ny famaritana ny tenany, ankizivavy kely, mpanaraka lamaodim-behivavy tanora, tsy ny zanakao vavy akory. Herintaona mahery kely teo ho eo, niala izy, ary nanjary mpikambana mavitrika tao amin'ny fanoherana demokratika rosiana nanomboka hatreo. Vao haingana tamin'ny volana jolay, nanoratra tamin'ny tambajotra Batenka.ru i Borisova mikasika ireo traikefany amin'ny naha-mpitandro filaminana azy. navoakan'ny RuNet Echo ny lahatsorany, nadika tamin'ny fiteny Anglisy, misy fizaràna telo. Ity no fizarana voalohany. Azonao vakiana amin'ny fiteny Rosiana eto ny tantarany manontolo.
“Vao mainka miharatsy ny ety”. Henoko matetika avy amin'ny mpiara-miasa amiko, Lieutenant Antonov, io fehezanteny io, ary tsy ananako antony tsy hinoana azy tamin’izay fotoana izay. Niditra ho mpitandro filaminana mpanao fiambenana aho raha vao 18 taona monja. Talohan'io aho, niasa taminà fivarotana mpaninjara iray, izay nanjary nankaleo ahy. Ny lohataonan'ny 2013, nandroso hevitra ahy ny reniko mba hanaraka namana iray niasa tao aminà orinasa misahana ny fiarovana izay namaly ireo fanairana. Somary nanorisory ihany ilay asa. Tena orinasa misahana ny fiarovana manokana ilay orinasa, saingy manana sata ofisialy ireo manamboninahitra. Nilaza taminy aho fa tsy tiako ny mijanona anaty birao. Nitselatra ny tao an-dohako ny hoe “Nefa raha toa ka tsy birao, dia aiza?” . Noho izany, nidina ho any amin'ny departemantan'ny polisy tao an-toerana aho ary nilaza taminy hoe, “Manao ahoana, te-hiasa ho anareo aho.”
Nentin'izy ireo tao amin'ny departemanta miandraikitra ny mpiasa aho, tao amina birao iray izay nahitana ramatoa nipetraka iray teo ambony seza. Lehiben'ny polisy izy io, ary filoha lefitra tao amin'ny toeram-piasana. Nipetraka tamin'ny seza nanatrika azy aho. Niteny ilay lehiben'ny polisy fa polisy ho ao anatin'ny sampana squad ihany no raisin'izy ireo. “Inona izany squad?” hoy aho nanontany azy. Avy eo nanazava izy, tena mazava fa nanantena ahy handà izy. Ny sampandraharahan'ny mpiambina mpanao fisafoana. Asam-pisafoana. “Toa tsara izany”, hoy aho.
Efa nandre karazan-javatra maro momba ny polisy aho. Efa fitenin'ireo namako ny hoe, “Pelaka avokoa ireo Polisy,” saingy tsy mahasarika ahy velively ny fanamarihana sahala amin'izany. Ny mahasarika ahy dia ny fananako ny hevitro manokana.
Taorian'ny faneken'ny Kapiteny Alexandrovna ny fangatahako asa, nanomboka nanangona ireo antontaratasiko aho. Mba ho lasa manmboninahitry ny polisy, tsy ilaina ny manana fahaizana ambony, raisini'izy ireo ho sergent ambaratonga voalohany ianao, ary koa, miaraka amin'ireo diplôma avy amin'ny dingana faharoa. Roa volana no laniko nanangonana ireo antontaratasy nilaiko. Ho fanampin'ny dika mitovy amin'ny pasipaoroko sy ireo taratasy mikasika ny fianarana nandalovana ary ireo mpampiasa, nilaiko koa ny taratasy fanamarinana avy amin'ny tompon'ny trano nofaiko, mampiseho fa izaho dia mpanofa tompon'andraikitra izay tsy manao fety mitabataba. Ary nilaiko koa ny taratasy fanamarinana izay mampiseho fa tsy voan'ny aretin-tratra aho, tsy mifoka rongony sady tsy adala. Ary nisy ireo taratasy fanamarinana mampiseho fa izaho dia tsy bevohoka, ary tsy voan'ny SIDA, farasisa, na hepatita. Dimy monja ireo hopitaly azoko naleha hakàna ireo antontan-taratasy ireo.
Miatrika psikology iray no dingana manaraka. ‘Blonde’ iray ao anaty akanjo iray sy kiraro avo voditongotra ny psykologiko. Nanontany izy, “Fa tena kely ianao an, fanaka malemy. Nefa dia handeha hanao asana mpiambina mpanao fisafoana?”
“Mety izany e,” hoy aho taminy.
“Asa maloto izany”. Ireo mpifoka sigara, ireo mpisotro toaka, ary ireo mpifoka rongony. Tsy matahotra ve ianao?
Nomeny fanadinana an-tsoratra lava be aho. Tadidiko fotsiny fa tsy maintsy namorona biby ho ahy aho. Tsy maintsy nanao ny sariny ary nanome ny anarany. Tonga tao an-tsaiko ny bandy iray izay manana vatana toy ny trondro ary ny lohany toy ny tigra. Nomeko anarana “trondroTigra” izy. Ny tena marina dia mety hatao ho fampirantiana kanto io: ireo biby araka ny iheveran'ireo polisy rosiana vao manomboka.
“Miandrasa fiantsoana,” hoy izy tamiko, dia niandry iray volana aho. Avy eo izaho ihany no niantso azy. “Olya, henoy…” hoy ilay feo hafa tao anaty antso nanomboka niteny tamiko. “Misy antony tsy miankina amin'ilay ramatoa izay nandray ireo antontan-taratasinao.” Sahala amin'ny toa very avokoa ireo mombamomba ahy rehetra. Fotoana fohy taorian'izay, fantatro fa tena “niala sasatra noho ny tsy fahasalamana” ilay psykology (vakio hoe: lasa nanala makafoka izy). Tsy maintsy nitory azy ry zareo, rehefa sarona ny lainga. Ary dia tsy maintsy nanangona indray ireo antontan-taratasiko aho.
Ny dingana farany mialohan'ny nandefasana ahy hiofana dia ny kaomisiona misahana ny fizaham-pahasalamana atao amin'ny miaramila. Tany aminà trano mitokana teo amin'ny manodidina an'i St. Petersburg no natao io fihaonana io. Tsy fantatro hoe nahoana, fa rehefa manome ny pasipaoronao amin'ilay mpiasa mpiandraikitra ianao, manamarika lakroa kely any amin'ny pejy farany ry zareo. Tenifototra kely iray.
Mpitsabo ampolony no tao. Manadala ny filaharana. Rehefa nijoro teo alohan'ny iray tamin'izy ireo aho, hitako fa tokony ho 165 santimetatra ny halavan'ny polisy iray fara-fahakeliny [5 feet, 5 inches]. Saingy izaho 162 santimetatra monja [5 feet, 4 inches]. Inona no tokony hataoko? Anatin'ireny tranga ireny, afaka manoratra fangatahana iray ny departemantan'ny polisy eo an-toerana mba hanaikena polisy iray manokana, amin'ny filazàna fa ilaina ry zareo. Nanoratra iray ho ahy ny departemanta.
Olona mandefa anao mba hanao fiofanana ny psikiatra, izay mety haharitra telo volana, na mety haharitra enina volana. Telo volana no nandefasana ahy, nanapaka hevitra ry zareo hoe milamina tsara ny saiko.
Rehefa eo ampiofanana ianao, misalotra ny “civvies”-nao ianao, midika izany fa miakanjo ireo akanjonao manokana ianao, satria tsy mbola nanjohy amin'ny fomba ofisialy ny herin'ny polisy. Andraisana vola 13.000 robla [200 dolara] [isam-bolana] ny fiasàna miaraka amin'ny manampahefan'ny kaomisaria.
Ahoana no fijerin'ireo polisy tranainy ahy? Ireo izay nitàna ela ny fahefàna hatramin'ny nahaterahako? “Indro fa tonga ny zavavy iray miaraka amin'ireto volomaso hosoka sy fitombenana mafimafy tsara.” Ahoana no fijeriko ny tenako? Aingam-panahy nalaina tamin'ny seho amin'ny Fahitalavitra “Dexter” aho. Nalaiko sary an-tsina ho i Debra Morgan aho, tovovavy iray manifinify saingy mahery setra. “Izany no dikan'n hoe mpitsongo dia”.
Rehefa nanontany ahy ireo polisy amin'ny antony mahatonga ahy nanapa-kevitra ny “hanimba ny fiainako amin'ny fiadiana amin'ireo mpiankin-doha amin'ny zava-mahadomelina sy ireo mpidoroka, fa tsy mba mandray anjara amin'ny fikatsahana fahafinaretana,” nolazaiko azy ireo ny mikasika ny lalàna sy ny fiarovana ny olom-pirenena. Niresaka mikasika ny fiarovana, sy ny fanampiana olona aho. Nieritreritra ireo polisy tranainy, “Tsara, inona no azo atao amin'ito zavavy ito?” ary dia nopehan'izy ireo toy ny fanaon'ny ray teo amin'ny soroko. “Tsotra loatra ilay zaza,” hoy izy ireo.
Mazava ho azy, rehefa tonga mba hiofana miaraka amin'ireo tarika aho, izay lehilahy avokoa ny 80%-ny, tonga dia izaho no nanjary kianja fanaovana andrana tamin'ireo andalana misy azy mianakavy. Tamin'izany fotoana izany, mandritra ny maraina tontolo, nanaraka ahy avy ao aoriana i Sergent Valera (mandeha an-tongotra mody!) ao anaty fiaran'ny polisy – mandritra ireo ora fiasany. Miaraka amin'ny kafe mafanany izy, nalaina mivantana tany amin'ny McDonald's. Isaky ny hariva, matetika mandeha amin'ny fiara manokan'i Sergent Anton aho. Teo amin'ny enim-bolana lasa teo izay, nirona tamin'ny fimamoana i Anton, ary dia voaroaka niaraka tamin'ny fahafaham-baraka.
Vetivety dia tapitra ny telo volana.
Fandikàna avy tamin'ny teny Rosiana, nataon'i Kevin Rothrock ao amin'ny RuNet Echo ity lahatsoratra ity. Araho hatrany ny fihainona ireo andian-tantara manaraka mikasika an'i Borisova